In kabadan 2,500 oo maxaabiis ah oo lagu xiray howlgalka ka socda dalka Suudaan muddo sannad gudii ah. – Shabakadda Amiirnuur
January 16, 2020 7:29 am by admin Views: 80
Suudaan waxay goob joog ka ahayd ololihii ugu ballaarnaa ee qabqabashada ee waddanku caanka ku noqday muddo 3 sano ah, iyadoo 2 500 oo reer Suudaan ah la xiray intii u dhaxeysay 13-kii Diseembar, 2018, oo ah taariikhda ay dheceen dibadbaxyadii ugu horreeyay ee ka dhashay kacdoonkii Suudaan, iyo Abriil 11, 2019, oo ah taariikhda afgembigii Madaxweyne Cumar Al-Bashiir, sida lagu sheegay warbixinta Xarunta Afrika ee Caddaaladda iyo Daraasaadka Nabadda ee fadhigeedu yahay New York.
Warbixinta ayaa cinwaan looga dhigay: “Suudaan: dil sharci-darro ah iyo xabsi ku-hayn aan sharci ahayn”. Xaruntu waxay tilmaamtay in Suudaan marxaladdaan ay ku aragtay xariga carruurta, siyaasiyiinta iyo ardayda jaamacadda, gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolka Darfur.
Warbixinta cusub ee la sii daayay ayaa looga golleeyahay waxa lagu tilmaamay diiwaangelinta xadgudubyada xuquuqda aadanaha “inay gacan ka geysato dadaallada lagu hubinayo la xisaabtanka, caddaaladda iyo ku dhaqanka dastuurka” ee Suudaan.
Dhinacyada la xiray waxaa ka mid ahaa hoggaamiyeyaasha mucaaradka ee xisbiyada Qaranka, Xisbiga Wadajirka ah ee Suudaan, baalasha Xisbiga Socialist Baath, Xisbiga Wadajirka ah ee Suudaan, Xisbiga Federaalka ee Nasserist, qaar ka mid ah xubnaha Xisbiyada caanka ah, Dhaqdhaqaaqa Xoreynta Dadka – Qeybta Waqooyiga (hoggaanka Agar), bulshada rayidka, iyo kuwa u ololeeya warbaahinta bulshada.
Mas’uuliyiinta Suudaan waxay bilaabeen qabqabasho ballaaran oo ka dhan ah macallimiinta, dhakhaatiirta dadka, kuwa xoolaha, iyo injineerro ka socda qeybo kala duwan oo ay ka mid yihiin takhasusyada isgaarsiinta, qareennada, farmashiistayaasha, suxufiyiinta, iyo kuwa kale. Sida warbixinta lagu sheegay.
Waxaa lagu qiyaasey in kabadan 2,500 maxbuus oo la horkeenay maxkamada dembiyada kuwaasoo lagu soo oogay dacwado aan sharci aheyn. Muddadan, maxaabiistu waxa ay la kulmeen jirdil iyo dhibaatooyin badan oo dhanka caddaaladda la xariira.
Warbixinta waxaa sidoo kale ka mid ah marag-furkii maxaabiis hore oo la xiriira dhaqan-xumo iyo jirdil ay sameeyeen saraakiisha amniga.
Xarunta Afrika waxay ugu yeereysaa Xeer Ilaaliyaha Sudan inuu “u diyaariyo goobta baaritaan ballaaran oo la xiriira xadgudubyada ka dhanka ah mudaaharaadayaasha.
Dhinaceeda, maxkamadda Khartuum waxay soo saartay xukun dil ah oo lagu xukumay 27 sarkaal iyo xubno katirsan sirdoonka iyo nabadsugida, kadib markii lagu ogaaday jir dil iyo dil ay naftiisa ku dhaafiyeen macalin dugsi sare magaalada Khashm al-Qirba, oo dhacda bariga Suudaan, bishii Febraayo.
Dhanka kale todobaadkan waxaa magaalada Khartum ee caasimadda dalkaasi ka dhacay iska hor imaadyo hubeysan oo dhex maray ciidamada Melleteriga iyo askar katirsan qeybta howlgallada Mukhaabaraatka.
Cabdalla Xamduuk oo ah ra’iisulwasaaraha Sudan ayaa amaanay ciidamada Milatariga oo isaga taabacsan halka kuwa kale la sheegayo iney ku jaal yihiin Cumar Xassan Al-bashiir, Madaxweynihii hore ee talada laga tuuray.